Moa ve ny iOS 11.0.2 manamboatra olana amin'ny bateria? | Vaovao IPhone
Na dia maro aza ireo mpampiasa manamafy fa ny fiainana bateria miaraka amin'ny iOS 11 dia mitovy amin'ny hitany tamin'ny iOS 10, ny isan'ny mpampiasa manamafy fa ny andiany fahiraika ambin'ny folo an'ny Ny iOS dia tsy nohamarinina raha ny momba ny fanjifana bateria.
Hatramin'ny nanombohany, maro ireo mpampiasa nilaza fa nilatsaka tampoka ny batterin'ny fitaovany, nahatratra ambaratonga nampivarahontsana tsy mbola fahita. Fotoana fohy taorian'ny famoahana ny iOS 11.0, Apple dia namoaka ny fanavaozana voalohany, iOS 11.0.1, fanavaozana kely izay nifantoka tamin'ny famahana ny olan'ny Mail amin'ny Outlook.
Andro vitsy lasa izay, namoaka fanavaozana kely iray hafa i Apple, fanavaozana iray izay amin'ny teôlôjia dia tokony hamaha ny olan'ny bateria amin'ny iPhone 6 sy 7 indrindra, na dia misy aza ny mpampiasa sasany milaza fa ny iPhone 8 dia tsy dia milamina mihitsy. Apple dia tsy nanaiky na oviana na oviana fa ny baterian'ny fitaovana dia maharitra latsaky ny mahazatra, fa Azoko natao ny nanandrana nanamboatra ny olana tamin'ny famoahana ny iOS 11.0.2. miafina.
Ireo tovolahy avy amin'ny iAppleBytes, dia nanao fanandramana fampisehoana izay nampiasain'izy ireo iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s ary iPhone 7, izy rehetra dia nampidirina bateria 100% ary tamin'ny kinova 11.0.1. Rehefa vita ny fitsapana dia nohavaozin'izy ireo tao amin'ny iOS 11.0.2 ary nanao fitsapana mitovy amin'izany raha hihatsara ny bateria na raha, ny mifanohitra amin'izany dia mbola iray amin'ireo olana manelingelina indrindra ny mpampiasa izany.
Ny fitsapana dia natao tamin'ny fampiharana Geekbench, fampiharana izay manao dingana samihafa, samy feno kokoa noho ny teo aloha ny tsirairay ary mazava ho azy fa miteraka fihinanana bateria amin'ilay fitaovana. Araka ny hitantsika amin'ny horonantsary, Apple dia tsy namboatra ny olan'ny bateriaRaha ny marina dia toa kely kokoa noho ny tamin'ny andiany iOS teo aloha ny fiainana bateria.
Ny olan'ny mpampiasa izao dia ny roa andro lasa izay, Niato tamin'ny sonia ny iOS 10.3.3 i Apple, Ka tsy misy fomba hiverenana amin'ny kinova farany navoakan'i Apple an'ny iOS sy ny hatsarany nampiseho tamin'ireo mpampiasa azy. Ny mazava dia amin'ny herintaona, mpampiasa maro no hieritreritra indroa rehefa manavao ny fitaovany amin'ny kinova iOS vaovao mandra-pisavany raha ampy na tsia ny fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 11 » Moa ve ny iOS 11.0.2 manamboatra olana amin'ny bateria?
Vao avy nidina ambany ho amin'ny kinova 10.3.3 aho, ka toa mbola manasonia an'io kinova io i Apple.
Tsy manao sonia 10.3.3 intsony i Apple
Apple dia manohy manasonia ny iOS 10.3.3. Mba hijerena azy dia mila mandalo ipsw.me fotsiny ianao ary mitady ny iPhone 6s hahitanao raha mbola manohy sonia izy na tsia.
Osckar dia hoy izy:
Rehefa midina ambany ianao dia tsy afaka mametraka ny dingana hanaraka.
Mamaly an'i Osckar
MANDY dia hoy izy:
IZAO IREO THEME REHEFA MITSANGATRA Q, TSY MAINTSY MAMIDINA IOS 11 SATRIA 10.3.3 TSY HISY INDRAY IZAO
Valiny amin'i MANDY
Nataoko toy ny mahazatra. Antsipiriany amin'ity lahatsoratra ity.
mahaliana, satria ny rohy ilaozanao mazava dia milaza fa tsy sonia intsony. Fitsapana izany, misaotra!
Manana 6s aho, nanandrana nidina ambany ho 10.3.3 ary hahantona izany rehefa naneho ny menio utilities aho. Rehefa manomboka indray dia mamerina ny bara fanavaozana iOS ary rehefa miverina amin'ny efijery lehibe an'ny sary masina aho dia manokatra ny menio utilities ary toy izany koa. Nanandrana nametraka indray avy amin'ny iTunes aho fa nahazo ilay lesoka tsy fantatra 6. Tsy maintsy nametraka indray aho ios 11 honest Tsoriko fa tsy tiako ny mandeha manodinkodina eo anelanelan'ny kinova iray hafa, hiandry fanavaozana vaovao aho, hanana izy ireo hanitsiana azy io satria maro ny mpampiasa manana an'io olana io.
Mbola feno 9 taona aho izao
CarlosVi dia hoy izy:
Raha mety ny nolazainao, ny fanontaniana dia ny hoe "Amin'ny vidiny inona ???
Valiny tamin'i CarlosVi
Nanandrana fotsiny aho fa tsy hihena amin'ny iPhone 6S. Amin'ny farany dia tsy maintsy averiko amin'ny laoniny indray ny 11.0.2.
Tena ratsy momba ny bateria.
ho an'ny 6S raha mbola vita sonia izy, dia tsy fahita firy fa izany tokoa, ho an'ny 6S Plus dia tsy sonia, izay tsy fahita firy. Manana ny 6S Plus aho ary io no fotoana farany hanavaozako ity fomba ity voalohany, mandehana Apple, telefaona iray avy amin'io kijana io mba hahafahan'izy ireo mamoaka izany amin'ny bateria toy izany ho an'ny tsara sy ambony dia aza mamela anao hiverina amin'ny fandidiana. rafitra "miasa" fa tsy miasa, loza inona.
Na izany na tsy izany dia manala ny Bluetooth ny bateria dia lava kokoa kokoa ny bateria.
ROBZAR dia hoy izy:
ATAFY NY 11.1 BETA 2 ARY MAHASOA NY BATERA
Valiny amin'i ROBZAR
Fiorella dia hoy izy:
Tsy tiako ireo fanavaozam-baovao roa farany, ankoatry ny bateria, matetika mandeha foana ny wifi na dia esoriko aza ilay izy, tsy mirehitra intsony amin'ny efijery io rehefa raisiko ilay iphone ary mijanona tsy mandeha tsara ireo app, I te hanokatra ny sasany ary manidy izy ireo. Tokony hamafana azy ireo aho ary hametraka indray fa ny sasany amin'izy ireo aza tsy voatery hamafa azy ireo. Tiako foana ny Apple fa tena tsy faly amin'ny fanavaozana farany aho. Manana iphone 7 aho
Valiny tamin'i Fiorella
Manokatra ny programa Microsoft Edge beta ho an'ny iOS i Microsoft